Matanho ekugadzira zvirongwa. Zvirongwa muLinux 2 | Linux Vakapindwa muropa
Matanho ekugadzira zvirongwa. Zvirongwa muLinux 2
Rondedzero yezvirongwa zvekushandisa zvine tsananguro pfupi yezvinhu zvavo zvinoburitswa kakawanda pane izvi uye mamwe maLogux mablog. Mune dzino dzakateedzana Isu tinoda kuenda nhanho imwe kumberi uye nekupa vashandisi iwo akakosha maficha avanoda kuti vazvisarudzire vega.
In the chinyorwa chapfuurar isu takanga tasimbisa misiyano pakati pechirongwa (seti yemabasa kubva pakusarudza mushandisi zvinoda kukudziridza kunyorera kunogutsa) (Raira, uchishandisa mutauro wechirongwa unonzwisisika kuchinhu pamusoro pemabasa anofanira kuitwa)
Isu takatiwo musiyano uripo pakati pekodhi mhariri nenzvimbo inosanganisirwa yekusimudzira, ndeyekuti yechipiri inosanganisira maturusi ezvikamu zvese zvehurongwa hwekuita.
1 Matanho ekugadzira zvirongwa
1.1 Tsananguro yedambudziko
1.1.1 Sarudza zvinodiwa
1.1.2 Gadza iwo maficha
Matanho ekugadzira zvirongwa
Basa rekugadzirisa rine matanho anotevera:
Edza chirongwa ichi
Nyora chirongwa ichi
Izwi rekuti dambudziko rinofanirwa kutorwa nenzira yakafara. Zvichida zvingave zvakakodzera kuti uchinje nechirongwa. Chaizvoizvo kune mushandisi ane zvimwe zvinodiwa zvinogona kugutsikana kuburikidza nekugadziriswa nekombuta yedata riripo.
Tinogona kupatsanura danho iri kuita zviitiko zviviri:
Gadza iwo maficha
Apa ndipo apo isu tinosarudza izvo chirongwa ichi chichafanirwa kuita
Semuenzaniso, panguva yekuisa vanhu voga, maresitorendi akaona shanduko yavo huru kubva pakutengesa chikafu mumba yekutandarira kusvika pakuendeswa kumba. Izvo zvingangoita ipapo kuti ivo vaifanirwa kugadzirisa avo ekubhadharisa masystem. Pfungwa yakanaka ingave yekubatanidza iyo yekubhadharisa system pamwe neyekuodha kunyorera. Kungofanana nekutumirwa kwezuva kuri kuwedzerwa kune maodha akaunzwa, hurongwa hunofanirwa kubvisa izvo izvo nechimwe chikonzero zvaisagona kuve.
Kana izvo zvinodiwa zvangosarudzwa, zvinoramba zvichisarudzika kuti mhinduro inofanira kuitei kuti izvigutse.
Mumuenzaniso wedu tinofungidzira kuti ingave iri zano rakanaka remhinduro yekumhanyisa otomatiki mirairo yakaitwa kubva mukushandisa. Nekudaro, izvo zvaizoreva kuti kuve nekuwana kumaseva avo uye isu zvimwe hatizoiwane. Naizvozvo, chakakodzera kwazvo chingave chekumisikidza kodhi muhurongwa hwekubhadharira wega wega uye kuti, kunze kwekunge zvaratidzwa pachena nevanozvigovera, vanoonekwa sevanounzwa.
Mapurogiramu ane maviri anobatsira maturusi ekubatsira mune dambudziko dudziro nhanho. Flowcharts uye pseudocode kunyora. Uye, zvingave sei zvisina kudaro, pane maficha anowanikwa eLinux anotibvumidza kuti tivashandise.
Mafurcharts anomiririra mifananidzo yezvinofanirwa kuitwa nechirongwa ichi uye kuti chichachiita sei. Geometric manhamba anoratidza zviito uye miseve kuteedzana kwavo.
IAmerican National Standards Institute (ANSI) yakagadzira yakajairwa seti yezviratidzo zvekuyerera. Mamwe acho ndeaya:
Rectangle: Ichi chiratidzo chinoshandiswa kana shanduko ikaitwa kuchinhu kana kuiswa nemaoko kana mashandiro echishandiso. Tsananguro pfupi yechiitiko chakaitwa inosanganisirwa mukati mekatekete.
Diamond: Ichi chiratidzo chinoshandiswa kuratidza kudiwa kwekuita sarudzo. Zvinoenderana nezvakatorwa, imwe nzira ichateverwa, zvekuti kubva padhaimani pane bifurcation mukuita. Imwe neimwe yesarudzo ine bazi rine zita rayo. Tsananguro pfupi yemhando yesarudzo yakasanganisirwa padhaimani.
Museve: Unganidza zviitiko uye sarudzo zvinoratidza maratidziro azvinoitika.
Denderedzwa hombeInoratidza nzira yekumira kubvumira kuongorora kana kubvumidzwa. Tsananguro pfupi inosanganisirwa mukati medenderedzwa.
Triangle: Inoratidza iyo faira yezvinobuda.
Muchinyorwa chinotevera tichaona kuti chii chinonzi pseudocode icho chirongwa chinoshandisa kunyora uye kugadzira kuyerera madhayagiramu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Matanho ekugadzira zvirongwa. Zvirongwa muLinux 2
Zano rakanaka rekugadzira izvi zvinyorwa kuti zvigadzire zvirongwa muLinux!
Manjaro 2021-07-23 ikozvino yawanikwa neNvidia 470.57.02, Pipewire 0.3.32 uye mukuru KDE SDDM